Maitiro ekugovana zvinyorwa neWhatsApp | IPhone nhau
Maitiro ekugovana magwaro neWhatsApp
Kunyangwe zvingaite senge manyepo, yekudzoserwa kuWhatsApp iri pakupedzisira kusvika iyo inobatsira chaizvo uye iyo icharerutsa zvinhu zvakanyanya, nekuti haungogone chete kugovana mafoto nemavhidhiyo, asi zvakare ichakutendera iwe kutumira magwaro. Iyo ichangoburwa kugadziridza iyo inonyanya kufarirwa mameseji kunyorera muzvikamu izvi yakatanga, uye kuti iwe uri kutotora kuti uise kana usati wambozviita izvozvi, zvinokutendera iwe kushandisa yako email zvishoma zvishoma. Unotumira sei magwaro kuburikidza neWhatsApp? Tinokupa zvese zvese pazasi.
Maitiro acho akangofanana nekutumira chero chimwe chibatiso chawakagovana newaunofambidzana navo kusvika ikozvino. Kuruboshwe kwebhokisi kwatinonyora zvinyorwa tichaona bhatani rine museve kumusoro uye icho hachisi chinhu chinopfuura bhatani re "Govana». Paunodzvanya, dzakasiyana nzira dzekugovana dzatinadzo dzinozoonekwa (foto, vhidhiyo, reel mafoto, zvinyorwa, nzvimbo ...). Zviripachena, isu tichafanirwa kusarudza iyo "Goverana Gwaro" sarudzo, mushure mezvo maapplication akasiyana anoenderana atakaisa pane yedu kifaa uye anogona kutora magwaro anozoonekwa.
Kana Kesari zviri zvaKesari, WhatsApp nguva ino yaita nemazvo (kunyangwe tichizoona kuti haina kunyatsonaka) uye kune akawanda mafomu anoenderana neichi chinhu chitsva. Ichokwadi zvakare kuti Apple yakatoita zvese nezvayo zvekuwedzera zveIOS, asi isu hatisi kuzosarudza izvozvi. Unogona kugovana magwaro akachengetwa paDropbox, Bhokisi, ICloud Drive, kana kubva kunyorera senge PDF Nyanzvi uye Zvinyorwa (Iyi yekupedzisira kunyorera inokurudzirwa zvakanyanya uye mahara). Iwo mamwe eanonyanyo shandiswa online ekushandisa ekushandisa uye masevhisi, asi kana iwe usina chero chemaapplication andataura, iwe unogona kugara uchitarisa pane "Zvimwe" bhatani kuti uwedzere chero ewawo iwe wawakaisa.
Sarudza kuti gwaro rako riripi, sarudza uye woritumira kune vako vokukurukura. Unogona kuzviita kune vamwe vanhu kana kuboka chats, Pasina matambudziko, asi mune iyi sarudzo yekupedzisira nhengo dzese dzechikurudziro dzinofanirwa kuve neyakagadziriswazve kana iyo isingatenderi iwe kuti ugovane iyo faira. Apa ndipo chaipo panobva "asi" yeiri basa nyowani: parizvino ma "pdf" mafaera anogona kugovaniswa uchishandisa iyi sarudzo, saka kupfuura "share magwaro" inofanira kunzi "share pdf", asi tinovimba tinokwanisa tumira nekukurumidza mhando dzese dzefaira, kana zvirinani zvakajairika: doc, ppt, xls, zvichingodaro. Anotambira gwaro achakwanisa kurivhura mukati meWhatsApp chaimo pasina kukosha kwezvimwe zvinoshandiswa, uye achakwanisa kurichengeta uchishandisa sarudzo mune yeIOS menyu menyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Maitiro ekugovana magwaro neWhatsApp
Ini ndakango muyedza neIzwi faira rakachengetwa paDhiraivha uye rinoshanda. Saka kwete, hazvifanirwe kunzi "Kugovana PDF" ...?
reynaldo villalpando akadaro
Maitiro aya haashande nePowerPoint maficha ekuratidzira (pps)
Pindura kuna reynaldo villalpando
iOS 9.3 beta 5 inodzivisa Night Shift mune yakaderera simba modhi
Apple inokunda patent iyo inogona kuvatendera kuti vagadzirise iPhones